शरद ऋतुमा हिमाल आरोहण अनुमतिबाट साढे ६ करोड रोयल्टी संकलन – Nepali Digital Newspaper
शरद ऋतुमा देशका विभिन्न हिमाल आरोहण अनुमतिबाट अहिलेसम्म रु. ६ करोड ४० लाख ८८ हजार ८४ रोयल्टी संकलन भएको छ । ६२ देशका एक हजार १६२ आरोहीबाट सो रोयल्टी संकलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार आरोहण अनुमति लिनेमा पुरुष ९१५ र महिला २४७ जना रहेका छन् । आरोहीले शरद ऋतुमा विभिन्न ५० हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएको पर्यटन विभागका नायब सुब्बा रामेश्वर निरौलाले जानकारी दिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी २७ समूहका ३१६ जनाले आमादब्लम हिमालको आरोहण अनुमति लिएका छन् । जसबाट रु. एक कारोड ४० लाख ३६ हजार ३०० रोयल्टी संकलन भएको छ ।
सबैभन्दा बढी रोयल्टी भने मनास्लु हिमाल आरोहण अनुमतिबाट उठेको छ । मनास्लुबाट मात्रै रु. दुई करोड ७० लाख ८५ हजार ६०० रोयल्टी संकलन भएको निरौलाको भनाइ छ । मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि २७ समूहका २६४ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
शरद ऋतुमा मात्र ६२ देशका ९ सय १५ पुरुष र २ सय ४७ महिला गरी एक हजार १ सय ६२ आरोहीबाट ५० हिमाल आरोहण अनुमति लागि ६ करोड ४० लाख ८८ हजार ८४ रोयल्टी संकलन
त्यसैगरी धवलागिरि हिमाल आरोहणबाट रु. ३२ लाख आठ हजार पाँच रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमाल आरोहणका लागि तीन समूहका ३१ जानले अनुमति लिएका छन् । यता थापा पिक आरोहण अनुमतिबाट रु. ११ लाख ८९ हजार ३१२ संकलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
वसन्त ऋतुमा आरोहीको भिड लाग्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि दुई समूहका १० जनाले अनुमति पाएका थिए । उनीहरुबाट सरकारले रु. ६३ लाख ११ हजार ८०० रोयल्टी संकलन गरेको छ । लामो समयपछि शरद ऋतुमा आरोहणका लागि गएको भए पनि सफल हुन नसकेको निरौलाको भनाइ छ । सगरमाथा आरोहण असफल भएपछि उनीहरु फर्किसकेका छन् ।
शरद ऋतुमा आरोहणका लागि मौसम सामान्य अनुकूल हुने भए पनि उच्च गतिको हावाका कारण जोखिम हुने आरोहीको भनाइ छ । सगरमाथा आधार शिविरदेखि क्याम्प १ सम्मको अति जोखिमयुक्त बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार शरद ऋतुमा बाटो निर्माण गर्दा खर्च बढी लाग्छ । त्यसैले यो समयमा आरोही समूहले नै बाटो निर्माण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । वसन्त ऋतुमा ६०० अमेरिकी डलरमा क्याम्प १ सम्मको बाटो बनाउने सकिने भए पनि शरद ऋतुमा कम्तीमा २५ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने समितिले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले समेत शरद ऋतुमा आरोहणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । यस याममा आरोहणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न सरकारको ध्यान नगएको आरोही किताबसिं तामाङले बताए ।